ရှေးကျသော မော်တော်ကား ပုံစံငယ်များ၊ ကားပုံစံငယ်များနှင့် သင်္ဘောပုံစံငယ်များကို စုစည်းပြီး - Yangon Media Group
မော်တော်ကားများကို တကယ့်ကားအစစ်ပုံစံအတိုင်း ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ဖန်တီးနေသူ လက်မှုပညာ ရှင်ကိုကိုထိုက်အနေဖြင့် သူဖန်တီးထားသည့် ရှေးကျသော မော်တော်ကားပုံစံငယ်များ၊ ကားပုံစံငယ်များ၊ သင်္ဘောပုံစံငယ်များကို ပြပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ပြသသွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ပြသနိုင်ရန် အချိန်ယူ ဆောင်ရွက်ရဦးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပုံစံငယ်များနှင့်လိုက်ဖက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းပြသမည်ဟုဆိုသည်။ “အစ်ကို ဒီလိုကားပုံစံငယ်တွေလုပ်လာတာကြာပါပြီ။ ဒါတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါမှလည်း မရောင်းခဲ့ပါဘူး။ ပြပွဲအနေနဲ့ တော့ ပြသချင်တယ်။ လောလောဆယ် ကားပုံစံငယ်တွေရယ်၊ သင်္ဘောပုံစံငယ် တွေရယ် လုပ်ထားပါတယ်။ လေယာဉ်ပုံစံ ငယ်နဲ့ မီးရထားပုံစံငယ်ကတော့ မလုပ်ရ သေးပါဘူး။ ပြပွဲလုပ်ဖို့ အချိန်ယူရဦးမယ်။ ပြင်ဆင်ရဦးမယ်”ဟု လက်မှုပညာရှင် ကိုကိုထိုက်က ပြောသည်။ ပန်းချီမေဂျာဖြင့် ကျောင်းပြီးထား ပြီး ယခုလို မော်တော်ကားပုံစံငယ်များကို အနုပညာဖန်တီးမှုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တစ်ခါမှ မရောင်းဘူးဖူး။ ဒါပေမဲ့ ရှေးကျတဲ့ကားတွေအခုမရှိတော့ တဲ့ကား တွေ ဥပမာ ၃၉ ဗိုက်ပူလိုကားမျိုးတွေကိုပုံစံငယ်လုပ်ပြီး တကယ့်ကားပိုင်ရှင်ကို တော့ မေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပြပွဲပြဖို့ကားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ အဝေးပြေး လမ်းပုံစံတွေ၊ လူတွေအစရှိတဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်အခင်း ကျင်းတွေကိုလည်းလုပ်ပြီး ပြသသွားဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ၄င်းကဆက်လက် ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မော်တော်ကားများအဖြစ် ၃၉ ဗိုက်ပူကား၊ အဝေးပြေး ကားများ၊ အဝေးပြေးဒိုင်နာကားများစသည့် ကားအမျိုးအစားအစုံအလင်ကို ပုံစံငယ်များ ပြုလုပ်ထားကြောင်းနှင့်တစ်ကိုယ် တော်ပြပွဲပြနိုင်သည့်အထိ ကားပုံစံငယ်များကို ဆက်လက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ KNU/KNLA PC ဌာနချုပ်ရှိရာ နယ်မြေဒေသများတွင် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စိုက်ပျိုး??
အခြားရာထူးဖြင့် ဘောလုံးလောကသို့ ပြန်လာရန် ကာကာ ရည်မှန်း
ဒေါက်တာ မျိုးညွန့် ကို အမှုမြောက်၊ မမြောက် ရန်ကုန်တွင် လာစစ်မည်
ဆည်တော်ကြီး ရေလှောင်တမံမှ ရေပို ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် မတ္တရာရှိ ကျေးရွာအုပ်စု လေးအုပ်စုနှင့် စ??